Amboary ny bokotra Bixby handefasana fampiharana amin'ny Samsung Galaxy | Androidsis
Ahoana ny fakana sarintany ny bokotra Bixby handefasana fampiharana na baiko amin'ny Samsung Galaxy miaraka amin'ny UI iray
Manuel Ramirez | | About us, Android cheat
Samsung androany nohavaozina Bixby hahafahanao mampavitrika fampiharana na baiko avy amin'ny telefaona Galaxy misy Android Pie. Raha atao teny hafa, ireo rehetra nanavao ny One UI dia afaka mahazo tombony amin'ny fampandehanana ny fampiharana fakan-tsary amin'ny bokotra ara-batana mitovy.
Vaovao mahafinaritra ary efa nihaona izahay andro vitsivitsy lasa izay, na dia tsy nanantena ny hahitana izany haingana be aza izahay. Ary satria hatramin'ny fanavaozana ireo serivisy Bixby samihafa ao amin'ny Galaxy dia azonao atao ny miditra mba hametrahana saritany ny bokotra Bixby an'ireo telefaona ireo an'ny marika Koreana Tatsimo.
1 Fampiharana sy baiko inona avy no azontsika ampidirina?
2 Ahoana ny fomba hampiasana ny rindranasa na ny baiko amin'i Bixby
Fampiharana sy baiko inona avy no azontsika ampidirina?
Faly be izahay rehetra andro lasa izay rehefa nihaona izahay fa afaka mampiasa farany mankany amin'ilay bokotra Bixby izay tsy voamariky tanteraka ary sakana ho an'ny maro. Farany Samsung dia nihaino ny fiarahamonin'ireo mpampiasa azy ary nandefa io fanavaozana io ianao izay mamela anao hampihetsika ny fampiharana X amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra ara-batana.
Na dia tsy maintsy lazaina aza fa misy fetrany. Voalohany, fampiharana dia tsy azo alefa ho an'ny mpanao gazety iray na iray hafa fampiharana ho an'ny avo roa heny. Izany hoe, azonao atao ny manamboatra fomba iray na hafa. Azonao atao ny misafidy tsindry tokana na avo roa heny hanombohana fampiharana X.
Ny iray hafa amin'ny fetrany dia ny tsy fisehoany na aiza na aiza no ahafahana mampihetsika ny Google Assistant. Izy io indrindra no fikirakira nandrasan'ny maro ka, rehefa manindry ny bokotra Bixby ianao, dia hiseho ny feon'ny Mpanampy Google manontany izay tokony hatao. Samsung dia nametra an'io safidy io ary tsy hahita ilay fampiharana voalaza etsy ambony ianao. Mazava ho azy fa mipoitra ny fampiharana Google, Google Home ... (?)
Na izany na tsy izany, dia hanana hery lehibe ianao izao rehefa mampavitrika ny bokotra Bixby ho an'ny rindranasa tianao rehetra. Instagram, Facebook Messenger, jiro finday, ny Secure Folder ary maro hafa.
Ahoana ny fomba hampiasana ny rindranasa na ny baiko amin'i Bixby
Samsung dia mamela antsika hampiasa fampiharana avy amin'ny lisitra ananantsika na iray amin'ireo baiko am-peo azontsika ampiasaina amin'ny Espaniôla. Ny tiako holazaina dia inona no hanananao ny lisitra misy anao izay namboarinao ho an'ny baiko, toy ny Good morning, sns, na afaka misafidy iray manokana isika, toy ny fandrehitra jiro na fametrahana ny telefaona amin'ny fomba mangina.
Andao handeha amin'ny dingana afaka mampiasa ny bokotra Bixby miaraka amina fampiharana:
Voalohany manavao ny serivisy Bixby izahay avy amin'ny fampiharana Galaxy Store.
Vita izany, handeha isika Fikirana> Endri-javatra mandroso> Bixby Key.
Ao amin'ny Bixby Key dia manana ireo fiasa roa azonay alamina (tadidio fa tsy afaka mampiasa afa-tsy iray ianao).
Tsindrio eo "Mampiasà gazety roa" na "Tsotra".
Amin'ny efijery manaraka dia hanana safidy "Open application" na "Manatanteraka baiko haingana" isika.
Raha misafidy isika Misokatra fampiharana avy amin'ny kisary cogwheel, afaka misafidy lisitry ny fampiharana azo alaina isika.
Raha toa ka misafidy ny baiko fampiharana isika dia hiseho ny andiana baiko tsy manara-dalàna hanao hetsika fototra.
Rindrambaiko na baiko voafantina, isaky ny manindry ny bokotra Bixby ianao (tsy mihidy ny terminal) dia halefa mivantana.
Amin'izany fomba izany, raha mampiasa fampiharana an'ny antoko fahatelo ianao, toy ny mety ho ny seranan-tsambo gcam an'ny Galaxy S9, azonao atao ny manamboatra ny bokotra Bixby handefasana azy ary hampiasana azy avy hatrany. Ny tianay dia izany Samsung dia tsy nametraka fetra ao amin'ny fikirana bokotra Bixby hahafahanay mandefa ny Google Assistant. Toa tsy maintsy miandry isika, raha sanatria misy izany, satria ny Mpanampy dia miady amin'ny kianja filalaovana mitovy amin'ny Bixby; na dia mazava aza hoe iza no ho mpandresy.
Fantatrao izao hoe ahoana amboary ny bokotra Bixby an'ny Samsung Galaxy miaraka amin'ny UI iray handefa fampiharana na baiko manokana. Aza adino fa Bixby, izay efa amin'ny Espaniôla, dia mamela anao hampihetsika saika ny safidin'ny Quick Access amin'ny findainao, ka hahafantaranao tsara ny lisitr'izy rehetra dia azonao atao ny manamboatra ny bokotra Bixby ara-batana araka ny itiavanao azy. Andao hiandry raha hanome fotoana maimaimpoana ho an'ny Assistant hanome azy io ny fotoana sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ahoana ny fakana sarintany ny bokotra Bixby handefasana fampiharana na baiko amin'ny Samsung Galaxy miaraka amin'ny UI iray
Ny Spyro ny karazan'akon'ny dragona ankafizinao dia misy ao amin'ny Skylanders Ring of Heroes
Ahoana ny fametrahana EMUI 9 amin'ny Huawei Mate 9: nahatratra ireo maodely ireo ihany ny sosona